नेपाल आज | वृन्दालाई बलात्कार गर्ने भगवान विष्णुलाई सजायको सट्टा किन गरिन्छ पूजा ? (भिडियाेसहित)
वृन्दालाई बलात्कार गर्ने भगवान विष्णुलाई सजायको सट्टा किन गरिन्छ पूजा ? (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली समाज बेग्लै संस्कार, परम्परा र धार्मिक मान्यताहरुले निर्देशित छ । विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा समाजमा धर्म र रिवाजका विषयलाई लिएर बहस पनि हुने गर्छ । धार्मिक कथाबारे चर्चा पनि हुने गरेको छ । कृष्ण, राम, विष्णुबारे धेरैले अनेकन प्रश्न उठाउँछन् । नेपालआजले पनि यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ अनन्तश्री जगतगुरु बीरेन्द्र परमहंश ज्योतिषाचार्यजी महाराजसँग मागेको छ । ती प्रश्न र उत्तर यस्ता छन्ः
भगवान कृष्णले राधासँग प्रेम गरेर किन रुक्मिणीसँग विवाह गरे ? एकजनासँग माया साटेर अर्की च्याप्न मिल्छ ?
–भगवान कृष्णले राधाका रुपमा आफ्नै एक अर्को छायाँ निर्माण गर्नु भएको थियो । राधा कृष्णसँग भिन्न थिइनन् । कृष्णकै एक भाग थिइन् । आफ्नै भागसँग कसरी विवाह सम्भव हुन्छ ? त्यसकारण उहाँको विवाह राधासँग भएन । कृष्णका पाँच जना पटरानी थिए भन्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ ।
१६ हजार गोपिनीहरु के भगवान कृष्णका प्रेमिकाहरु नै थिए ?
– गोपिनीहरु प्रेमका प्रतिक हुन् । त्रेतायुगमा भगवान रामलाई देखेर मिथिलाञ्चलका असंख्य नारीहरु मोहित भए । उनीहरुले रामको सुन्दरतालाई देखेर आफ्नो मान्छे बनाउने चाहना मनमनै राखे । तर राम त मर्यादा पुरुषोत्तम थिए । एक भन्दा बढी पत्नी राख्दैन थिए । ती नारीहरुको चाहना रामले कृष्णको अवतार लिँदा गोपिनीहरुमार्फत पूरा गरिदिए ।
भगवान विष्णुले भेष बदलेर, अर्काको रुप धारण गरेर अथवा भनौं जालन्धरको रुप बनाएर उनकी पत्नी वृन्दाको बलात्कार गर्नुभयो । यस्तालाई पनि हामीले पूजा किन गर्नुपर्ने ?
ईश्वरसँग तपाईले माग्ने भनेको कर्मफल हो । कर्मको फल त पाइनुपर्छ । वृन्दाको पनि कर्मफल पाएकी हुन् । वृन्दाले कैयनजन्मदेखि भगवान विष्णुलाई पाउँ भनेर व्रत गरेकी थिइन् । त्यही कर्मफल उनले पाएकी हुन् ।
रामायणमा कुम्भकर्ण खलपात्र कि विभिषण ?
विभिषण सत्पात्र हो । समाजको हितका लागि कूल त्याग्नु पर्छ । घरको हितका लागि आफूलाई त्याग्नु पर्छ । देशको हितका लागि समाजलाई पनि त्याग्नु पर्छ । त्यही भएर देशको हितका लागि विभिषणले समाज र कूल त्यागे ।
रावणको मृत्युपछि रामले विभिषणको विवाह मन्दोदरीसँग गराईदिएको सत्य हो ?
–त्यो सत्य होइन । त्यस्तो कुनै रामायणमा उल्लेख छैन । तर भाउजुसँग विवाहको प्रशंग कतै कतै उल्लेख छ ।
ब्रम्हाजीले आफ्नै छोरी सरस्वतीसँग विवाह गरेर सय वर्षसम्म लिला मच्चाए, छोरी पनि जन्माए । यस्ता पापी रहेछन् हैन ब्रम्हाजी ?
–ब्रम्हा र सरस्वती एकै हुन् । ब्रम्हाजीको अर्धांगिनी शक्ति गायत्री, सरस्वती, सावित्री भन्ने गरिन्छ । सरस्वतीसँग विवाह गरेको झुठो हो ।
चाकडी गर्दा, चाप्लुसी गर्दा वर पाइने चलन बसाइयो । पर्वत घुमेर आउने कुमारलाई छाडेर चाकडी गर्ने गणेशलाई वर दिए शिवले किन ?
– संसारका सार भनेको शिव हो । शिवको अर्थ कल्याण हो । गणेशले बुद्धि प्रयोग गरेर वर पाए । जसको बुद्धि हुन्छ, त्यसले धेरै बल लगाउनु पर्दैन ।
अनन्तश्री जगतगुरु बीरेन्द्र परमहंश ज्योतिषाचार्य जगतगुरु बीरेन्द्र परमहंश ज्योतिषाचार्य